Kambodza : Meteza Ho Voalohany Amin’ny Fitantaràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2017 13:40 GMT
Matetika loatra, dia te-ho voalohany amin'ny fampahafantarana ny zava-mitranga na ny toe-javatra miseho manodidina azy na any amin'ireo faritra hafa manerana izao tontolo izao ny ankamaroan'ny olona. Eto amin'izao tontolo izao izay ny teknolojia no manova ny fomba fiainantsika, te-hanao mihoatra noho ny hoe olona voalohany namaky na nahita ilay vaovao fotsiny isika. Tiantsika ihany koa ny mitatitra sy manazava olana iray ao an-tsaintsika na ireo zavatra sendra antsika, amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny fitaovan'ny haba-tranonkala mba hamoahana lahatsoratra, feo, eny fa na hatramina lahatsarinà hira aza. Mety ho resaka araka asa izany toe-javatra izany, na momba ny tena manokana, na tantara iray nanohina ny fontsika na ireo zavatra hafa ao an-tokotanintsika. Vonona isika ny ho voalohany hitantara izany. Tsy mitaky vaovao fotsiny amin'ny tendron-dratsan-tànantsika intsony isika, fa te-hizara koa ny fomba fijery, ny hevitra ary tantara miaraka amina tsindry kely amina ‘totozy’ fotsiny.
Nahasarika ny sain'i Sopheak ny fahalakin'ny fiovàn'ny endriky ny renivohitr'i Kambodza, Phnom Penh, izay nozanahan'ny frantsay fahiny. Talanjona tamin'ireo trano mijoalajoala vaovao vao haingana ilay mpitoraka bilaogy ao an-toerana ka nizara ny fanehoankeviny tamin'ireo andiana sary.
Tao anatin'izay taona vitsy izay, dia an'aliny ireo trano fonenana vaovao avobe aty Phnom Penh. Voaova ho trano fonenana ireo dobo, zaridaina, ireo toerana misy ny governemanta. Eo akaikin'izany, dia tsikaritray miavaka ireo birao vaovao vao naorinà orinasa sy ireo tranoben'ny banky.
Resahan'ilay mpitoraka bilaogy 24 taona ihany koa ny momba ny olan'ny tsipelina diso amin'ny fiteny Khmer araka izay nanoratany azy tamim-pahamalinana fa :
Amin'ireo hafatra amina dokambarotra, ireo taratasin-dokambarotra ary ireo tranom-barotra lehibe, dia be dia be ireo diso tsipelina satria tsy misy ny olona manamarina izany, samy voasoratra amin'ny teny Khmer nadika avy amin'ny teny anglisy na ny fiteny Khmer izany. Tiako ho tsindriana ireo teny vitsivitsy mahazatra ary diso tsipelina, tsy lazaina intsony amin'io ireo rafi-panabeazana mampiasa fahatany ilay fiteny. Ankoatry ny tsy fahafantarana ny fomba fanònona ny endri-tsoratra dia tsy misy dikany ireo hadisoana ireo satria tsy mandray rakibolana [ireo olona ireo]. Ary amin'ny teny anglisy, angamba nividy rakibolana [Anglisy-Anglisy] ry zareo hanamarinana satria matahotra ry zareo fa sao diso ilay voambolana.
Angamba fantatry ny ankamaroan'ny kambodziana ny anjerimanontolon'i Harvard any Etazonia satria misy sekoly ambaratonga faharoa mitondra izany anarana izany any Kambodza. Fa ho an'ilay mpitoraka bilaogy izay nanaparitaka ny sarin'ilay sekoly fianarana Anglisy sy Solosaina dia tsy azony antoka ny antony nanomezana io anarana io. Toy izao no vakin'ilay sora-baventy : ny Sekoly Ambarataonga Faharoa Hard Word dia manolotra anao ny kilasy fianarana teny vahiny : Anglisy, Shinoa, Thai ary Solosaina.
Andraso… Tsy ilay oniversite Harvard malaza be ity fa ny sekoly ambarataonga faharoa Hard Word. Tena tsy fantatro ny antony nanaovany ny anarana hoe “Hard Word”. Sary nalain'i Mungkol
Tom, mpamorona rindrankajinà solosaina any Etazonia dia mirehareha amin'ny rainy. ‘Ny fiainan'ny mpitsabo tamin'ny andron'ny Khmer Rouge ‘ no lohatenin'ny bokin-drainy. Antenain'ilay Khmer-Amerikana, 26 taona, monina any Missouri, fa ho azo vakiana amin'ny teny Anglisy io boky io ka ho fantatry ny olona amin'ny alàlan'ny masony ny momba ny fandringanana tamin'ny 1975-1979.
“Nosoratan'ny raiko io boky izay vao navoaka tany Kambodza io. Araka ny ambaran'ny lohateny, momba ny fiainany nitrongy vao homana tamin'ny andron'ny Khmer Rouge, tamin'ny 1975 ka hatramin'ny 1979, izay nahafatesana kambodziana manodidina ny 2 tapitrisa no tantarain'ilay boky.
Amin'ny maha-zanaka lahy, dia tena mirehareha ny aminao sy ny asanao aho ry Pa. Mahatonga ahy hankafy kokoa ny fiainana izany taorian'ny namakiako ny fiainana mafy niainanao nandritra ireo taona ireo. Misaotra anao aho noho ireo fanomezana mahafinaritra ireo. Heveriko fa hivoaka amin'ny teny anglisy tsy ho ela izy ity. Tiako hahalàla sy hahita ny fitondràn'ny Khmer Rouge amin'ny alàlan'ny masonao izao tontolo izao.”
Finaritra tokoa i Somongkol ka nanomboka ny lahatsorany tao amin'ny bilaoginy miaraka amin'ireto teny ireto : “nampitahotra ny trano fisakafoanana Pailin City any Lowell, Massachussetts, izao hariva izao ny tazo Dengy (Bemangovitra), valanaretina ateraky ny moka mpahazo ny faritra tropikaly, mitovy amin'ny tazomoka ihany ny fianahany ara-jeografia. ” Notaterin'i Somongkol ny fampisehoana nataon'ny tarika mpiangaly mozika Khmerikana tao amin'ny trano fisakafoanana Khmer any Lowell, Etazonia.
Mitantara betsaka ny momba ny fiainany fony izy mpianatra tany Etazonia sy ny raharahan'i Kambodza ao amin'ny gazety ilay Kambodziana manampahaizana avy amin'ny Fulbright.
“Na ahoana na ahoana, ny hery miavaka izay namondrona ity tarika fanta-daza ity dia ilay mpihira kambodziana malaza iray, Chhom Nimol, izay noraisina ho isan'ny tarika taorian’ ilay fampisehoana nipoaka be tany Long Beach, izay ipetrahan'ny ankamaroan'ireo vahoaka kambodziana ivelan'i Kambodza, ho anà vehivavy iray mpitarika voatery niventy ireo hira amin'ny fiteny Khmer izay tena nahatery azy ireo.
Ho setrin'ny didy fanamelohana ho faty ilay mpanao didy jadona malaza Saddam Hussein, naneho hevitra ilay mpitoraka bilaogy ao an-toerana Vanak.
Nahantona i Saddam Hussein, ilay lehilahy mahery sy mpanao didy jadon'i Iràka. Tahaka ny fitondràny ireo mpandraharaha mafia no nitondràny ny firenena. Lò hatrany amin'ny tsokan-damosiny. Azy ny tafika. Azy ny mpitandro filaminana. Azy ny fitsaràna sy ny lalàna. Notendrena hitàna andraikitra ambony tao amin'ny governemanta ny fianakaviany, ny rahalahiny, ireo zanany lahy.
Ary tianao ho fantatra ve ny fomba fisakafoanana antoandron'ireo mpanao gazety kambodziana ao amin'ny trano fanaovan-gazetin'ny Cambodia Daily – gazety kambodziana amin'ny teny Anglisy ?
Nandefa sary anankiroa i Juan Antonio Giner mba hitantaràna ilay tantara